Bitcoin डेबिट कार्ड सोधिने प्रश्न - Bitcoin Credit Card Comparison 2018
एक Bitcoin डेबिट कार्ड के छ?
एक Bitcoin डेबिट कार्ड कि तपाईं अनलाइन र अफलाइन पसलहरूमा देखि सामान र सेवाहरू खरीद वा एटीएम देखि पैसा झिक्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक भिषा वा मास्टरकार्ड छ. एकै समयमा यो सीधा Bitcoin धन द्वारा समर्थित छ. Bitcoin डेबिट कार्ड संसारमा कहीं पनि cryptocurrency धन खर्च गर्न सजिलो पहुँच बनाउन.
Bitcoin डेबिट कार्ड कस्ता प्रकारका अवस्थित?
प्लास्टिक Bitcoin डेबिट कार्ड जो तपाईं नै बाटो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा साधारण भिषा वा मास्टरकार्ड जस्तो देखिन्छ. भर्चुअल Bitcoin डेबिट कार्ड एक मानक डेबिट कार्ड जस्तै विवरण अनलाइन जारी छ. कार्डवाहक नाम, समाप्ति को र सीवीसी / CVV कोड को मिति क्रम मा प्रदान गरिन्छ, तर त्यहाँ सजिलो र धन पहुँच गर्न छिटो बनाउन कुनै phsyical उत्पादन छ.
म एक Bitcoin डेबिट कार्ड कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं कुनै पनि prefunded डेबिट कार्ड जस्तै Bitcoin डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं स्थानीय पसलहरूमा मा सामान र सेवाहरू खरीद वा अनलाइन स्टोर मा कार्डको ब्यालेन्स खर्च गर्न सक्छन्. तपाईं एक प्लास्टिक Bitcoin डेबिट कार्ड छ भने, तपाईं एटीएम देखि नगद झिक्न सक्छ. तपाईं दुवै घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय खरिद गर्न आफ्नो Bitcoin डेबिट कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
को मुद्राहरू के हो म संग एक Bitcoin डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
डेबिट कार्ड Bitcoin फिएट मुद्राहरू Bitcoin छेउमा मा उपलब्ध धन धारण. सबै भन्दा लोकप्रिय मुद्राहरू USD छन्, EUR र GBP. मुद्रा को Bitcoin डेबिट कार्ड रकम लिङ्क पूर्वनिर्धारित मुद्राको रूपमा सेट गर्न सकिन्छ, त्यसैले कार्ड संग सञ्चालन लेनदेन कि मुद्रा मा व्यक्त गर्दै. प्रदायकहरू जोडी साथै थप मुद्राहरू गर्न Bitcoin डेबिट कार्ड बजार खोल्न. अरु मध्ये, प्रदायकहरू पनि RUB मा पूर्वनिर्धारित मुद्रासँग Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदान गर्दछ, CNY, JPY, KRW, AUD र CHF. केही प्रदायकहरू पनि Bitcoin छेउमा साथै altcoins संग कार्ड निधि विकल्प छ.
म एक Bitcoin डेबिट कार्ड कसरी आदेश गर्न सक्छ?
एक Bitcoin डेबिट कार्ड पाउने क्रममा, यस प्रदायकको मंच को एक मा तपाईं दर्ता हुनुपर्छ. दर्ता प्रक्रिया कार्डवाहक व्यक्तिगत विवरण प्रदान समावेश, यस्तो नाम, जन्म मिति र निवास ठाउँमा. दिइएको जानकारी त्यसपछि फोटो आईडी र निवास एक प्रमाण संग प्रमाणित हुनुपर्छ. यो caldholder को ठेगाना समावेश गरेको बिल हुन सक्छ. ढुवानी विधि क्रम राख्दै र छनौट पछि प्लास्टिक कार्ड आफ्नो घर वितरित छन्. मामला मा तपाईं भर्चुअल कार्ड लागि रोज्न छ, कार्ड विवरणहरू आफ्नो इमेल ठेगाना जारी गर्दै. तपाईं व्यक्तिगत जानकारी साझा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं प्रमाणिकरण बिना अज्ञात Bitcoin डेबिट कार्ड आदेश गर्न सक्छ.
म प्रमाणिकरण बिना Bitcoin डेबिट कार्ड सक्छ?
हो. अज्ञात Bitcoin डेबिट कार्ड बजार मा प्रदायकहरू जोडी मा उपलब्ध छन्. तपाईं फोटो आईडी र निवास प्रमाण प्रदान प्रमाणिकरण प्रक्रिया मार्फत जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अज्ञात Bitcoin डेबिट कार्ड चयन गर्न सक्नुहुन्छ. यस मामला तर यो टिप्पण अप्रमाणित प्रयोगकर्ताहरूको लागि लागू सीमा सधैं कम प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरू तुलनामा छन् लायक मा. धन को त्यसैले मात्र सीमित रकम मात्र कार्ड प्रदर्शित गर्न नाम प्रदान लागि अज्ञात Bitcoin डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ विनिमय मा.
यसलाई कसरी लामो Bitcoin डेबिट कार्ड प्राप्त ले?
प्लास्टिक Bitcoin डेबिट कार्ड भिषा वा मास्टरकार्ड द्वारा जारी छन् र यसलाई लिन्छ 2-3 तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न सप्ताह. कार्ड प्राप्त गर्न समय कार्ड प्रदायक र कार्डवाहक बीच दूरी आधारमा छ. अतिरिक्त शुल्क लागि एक्सप्रेस वितरण गर्ने प्रदायक सबै चयन गर्न सकिन्छ. यस मामला मा कार्डहरू भित्र वितरित छन् 2-5 business days with the services provided by DHL along withatracking number.
म कसरी एक Bitcoin डेबिट कार्ड माथि सक्नुहुन्छ?
तपाईं Bitcoin भन्दा धेरै अन्य तरिकामा अप माथि गर्न सक्नुहुन्छ Bitcoin डेबिट कार्ड. तपाईंले बैंक तार स्थानान्तरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्रेडिट वा डेबिट कार्ड र Neteller र Skrill रूपमा वैकल्पिक भुक्तानी प्रदायकहरू. प्रायजसो तर PayPal कारण यसको नियम र सर्तहरू गर्न स्वीकार भुक्तानी विधि बीचमा छैन.
कसरी म Bitcoin डेबिट कार्ड पैसा झिक्न सक्छ?
तपाईं खाता लोड छन् रूपमा Bitcoin डेबिट कार्ड यस्तै तरिका बाट पैसा झिक्न सक्छ. तपाईं अर्को ठेगानामा bitcoins पठाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि एउटा बैंक खाता वा वैकल्पिक भुक्तानी प्रदायकलाई धन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, Skrill वा Neteller जस्ता. प्रायजसो तर PayPal छैन Bitcoin डेबिट कार्ड लागि स्वीकार निकासी विधि बीचमा छ.
म एक Bitcoin डेबिट कार्ड संग एटीएम पैसा झिक्न सक्छ?
हो. तपाईं विश्वव्यापी एक प्लास्टिक Bitcoin डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर एटीएम पैसा झिक्न सक्छ.
कति एक Bitcoin डेबिट कार्ड लागत?
को Bitcoin डेबिट कार्ड को मूल्यहरु प्रदायकहरू मार्फत बदलिने छन्. एक प्लास्टिक Bitcoin डेबिट कार्ड को एक समय जारी लागत बीच छ 5-25 अमेरिकी डलर. भर्चुअल Bitcoin डेबिट कार्ड को जारी लागत धेरै कम छ, तपाईं पनि केही ठाउँमा यसलाई निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्छन्. छेउको कार्ड को एक समय उत्पादन लागत, मासिक खाता मर्मतका शुल्क को मात्रा मा आरोप लगाएको छ 1 प्रति महिना USD.
को Bitcoin डेबिट कार्ड को कारोबार लागत व्यापक बदलिने छन्, अधिक महंगा कार्ड सानो कारोबार शुल्कहरू हुन सक्छ. कार्ड लोड शुल्क को सामान्यतया निःशुल्क छ, को withdrawals प्रकार मा आधारित चार्ज गर्दै गर्दा चयन. खरिद POS र अनलाइन स्थिर शुल्क वा एक prorata प्रतिशत शुल्क गर्न सकिन्छ. एटीएम withdrawals बीच चार्ज गर्दै 1.5-2.5% प्रति कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय withdrawals थप लागत. त्यहाँ पनि मुद्रा अनुवाद शुल्क चार्ज छ छ पूर्वनिर्धारित मुद्रा लेनदेन मुद्रा सँग मेल खाँदैन भने.
एक Bitcoin डेबिट कार्ड को सीमा के हुन्?
केही अवस्थामा कोष को अधिकतम रकम तपाईं एक Bitcoin डेबिट कार्ड लोड गर्न सक्नुहुन्छ छ. यो प्रभाव पार्ने पैसा को मात्रा तपाईं कार्ड संग खर्च गर्न सक्छन् र पनि नगद रकम तपाईं एटीएम देखि झिक्न सक्छ. प्रमाणित प्रयोगकर्ताहरू उच्च सीमा र पनि केही प्रदायकहरू हुन सक्छ दर्ता प्रयोगकर्ताहरूको लागि असीमित Bitcoin डेबिट कार्ड प्रदान गर्दछ. जीवनकालको topup वरिपरि सीमित छन् 2000 अज्ञात प्रयोगकर्ताहरूको लागि USD.
एक Bitcoin डेबिट कार्ड संग सम्बन्धित एटीएम निकासी शुल्क के हुन्?
डेबिट कार्ड प्रदायकहरू Bitcoin एटीएम देखि नगद वापस गर्दा शुल्क शुल्क. यो शुल्क प्रति कारोबार वा prorata चार्ज गर्न सकिन्छ. घरेलू एटीएम withdrawals आसपासमा खर्च 1.5%, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय एटीएम withdrawals मा चार्ज गर्दै 2.5%.
Bitcoin डेबिट कार्ड कारोबार सँग सम्बन्धित मुद्रा अनुवाद शुल्क के हो?
मुद्रा अनुवाद शुल्क लेनदेन को मुद्रा विभिन्न तुलना गरिएको छ मामला मा चार्ज छ Bitcoin डेबिट कार्ड सम्बन्धित खाता पूर्वनिर्धारित मुद्रा. यस मामला मा एक निश्चित 3% मुद्रा अनुवाद शुल्क बजार मा प्रदायकहरू सबै द्वारा आरोप लगाएको छ.